Ngabe Ibhizinisi Lakho Lithatha Inzuzo Yevidiyo Yomphakathi? | Martech Zone
Ngabe Ibhizinisi Lakho Lithatha Inzuzo Yevidiyo Yomphakathi?
NgoMsombuluko, Septemba 15, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ekuseni sithumele Kungani Ibhizinisi Lakho Kufanele Lisebenzise Ividiyo Ekumaketheni. Isitolo esisodwa sokusetshenziswa kwevidiyo eqhuba ukubandakanyeka okuhle nemiphumela amasayithi wamavidiyo omphakathi, anokuphakama okukhulu kokusetshenziswa nokubukwa. Izinkampani zisebenzisa lawa masu futhi zikhiqiza imiphumela elula futhi emangazayo ebukwa kakhulu, yabelwe okuningi, futhi ishayela ukuqonda okujulile komkhiqizo wazo namazinga aphezulu okuguqulwa.
Ngaphandle kwalokho Youtube, kunamanye amapulatifomu amaningi wevidiyo. iza, Vimeo, I-Google + Hangouts kanye Instagram zonke izindawo ezinhle zokwabelana ngevidiyo futhi zibambe iqhaza engxenyeni yezenhlalo yokuthengisa nge-e-hashtag nama-meta-information. Ngena ezweni levidiyo yomphakathi namuhla! Xhuma nabantu ngenkathi ungeza kunkhulumomphendvulwano etholakalayo enkampanini yakho nakumkhiqizo wakho ngemikhankaso yevidiyo ebuyisekayo, emnandi nephumelelayo. UMegan Rigger, uSigma Web Marketing.
Ezinye izinkampani ezinkulu zingalingeka bamba ividiyo bebodwa kepha besingeke sikucebise lokho. Nakhu ukuwohloka kwamasayithi aphezulu wamavidiyo omphakathi nezibalo zezethameli ezihambisanayo. Ngokutshala imali okukhulu, ungazinqoba izinselelo zokubamba - kepha awusoze wabamba ithuba lezethameli lawa masayithi:
Youtube yisiza sesibili esivakashelwa kakhulu emhlabeni futhi iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu - enabantu abangaphezu kwezigidi eziyinkulungwane ezivakashelwa njalo ngenyanga kanye namahora angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha zevidiyo ebukwa inyanga ngayinye.
Vimeo inikeza amabhizinisi enye indlela ekhangayo ku-Youtube. Amasayithi angaphezu kwama-250,000 asebenzisa iVimeo.
I-Google Hangouts isanda kufakwa kuzinhlelo zokusebenza ze-Google futhi iyindlela elula yokwabelana ngamademo abukhoma nezingxoxo, bese wabelana ngazo ngokuzayo.
Instagram iqale njengesiza sokuthatha izithombe kodwa manje isekela ividiyo. Ngo-Okthoba ka-2013, ama-40% wamavidiyo abiwe kakhulu adalwe ngemikhiqizo.
iza uhlobo lwe-Twitter yevidiyo (futhi ephethwe yi-Twitter), evumela ukuthi amavidiyo amafushane abiwe. Abanayo impilo ende, noma kunjalo!
Tags: google hangoutsinstagramukumaketha kwe-instagramividiyo yomphakathiividiyo yezenhlalo yebhizinisivimeoukumaketha kwe-vimeoNgifikileukumaketha umviniyoutubeukumaketha kwe-YouTube
Ikusiza kanjani iTwitter ukuthi Ushayele Ukuzibandakanya Okujulile
Sep 16, 2014 ngo-12: 49 PM
Bonke osomabhizinisi kufanele basebenzise ukumaketha kwevidiyo ngiyavuma nge-100%! Nginamabhulogi amaningana agcizelela leli phuzu. Akufanele nje kuphela ukuthi ukumakethwa kwevidiyo kube enye yezindlela zakho eziyinhloko zokukhangisa kepha ukwazi nokwenza kahle lawo mavidiyo ukuze acebe ngokuqukethwe futhi enzelwe i-SEO. ilungelo noma amavidiyo abo kanye / noma ibhizinisi ngeke kuze kubonakale. Okuthunyelwe okuhle kakhulu ekukhangisweni kwevidiyo!